धुवाँ रहित सुधारीएको चुलो कार्यक्रमः वातावरण सन्तुलन, दाउराको बचत
पाेखरा ११ साउन- अर्घाखाँचीको मालारानी गाउँपालिका वार्ड -५ बाँगी मा धुवाँ रहित सुधारीएको चुलो कार्यक्रम सुरु भएको छ । कार्यक्रमले मालारानीका अधिकांस घर सफा , वातावरण सन्तुलन र दाउराको बचत भएको छ ।
अर्घाखाँचीमा “स्वस्थ चुलो नेपाल” नामक गैरसरकारी संस्थाले दाता डिअाइ अाेफिनमाचर इ. भि. जर्मनी को आर्थिक सहयोगमा ” धुवाँरहित चुलो कार्यक्रम ” ल्याएको हो । अर्घाखाँचीमा किरण लामाको अध्यक्षता मा २७ जना को टोलि यस कार्यक्रम को लागी राखिएकाे बताए । चुलोको समान व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी शिवआलेले नपाएकाे बताए ।
मालारानीका २२१ वटा घरमा सुधारिएको चुला बनाएको चुलाकारीगर कुलदिप थापा मगर ले बताएका छन् । सुधारीएको चुलोले सफा भान्सा ,थोरै दाउरामा खाना पाक्ने भएकोले दाउरा बचत भइ जंगल जोगीने हुन्छ । धुवाँ रहित चुलोले आखा चिलाउने खोकी लाग्ने जस्ता समस्या बाट बच्न पनि सकिन्छ ।
सुधारिएको चुलोको सहि उपयोग गरेमा आगलागी तथा पोल्ने घटना कम हुने कुलदिप थापा मगर बताउछन । स्वस्थ चुलोको मर्मत ठुलो परिवार भएमा १५ दिनमा गर्नु पर्ने हुन्छ । यदि सानो परिवार छ भने २५ दिनमा चुलो सफा गर्नु पर्ने थापा मगर बताउछन । मालसामान र ज्याला सहित शुल्क २०० लिने गरेको बताए । अर्धाखाँचीमा स्वस्थ चुलाे नेपाल नामक गैरसरकारी संस्थाले दातामा अार्थिक सहयाेगमा भुवाँरहित चुलाे कार्यक्रम ल्याइकाे बताएका छन् ।
धिक जानकारी लिन परेमा
किरण लामा मोबाइल न.९८६१५०६९७५ ,
कुलदिप थापा मगर- ९८४४९२०६७१, ९८१०९८५५५८